Wepamusoro Wiricheya Ongororo | KarmanHealthcare.com
Vamwene vangu vanoda Karmen wavo mutsva wiricheya. Iye zvino ave kugona kuenda zviri nyore kufambidzana nesu uye anogona kufamba kana achida uye kuchovha kana akaneta. Ndatenda Karmen yechigaro chisina kureruka!
Iyi ndiyo yedu yekutanga Karmen wiricheya uye kusvika zvino zvave zvakanaka chaizvo. Tiri kushandisa icho sachigaro weshanduko wekubvisa murume wangu musimba rake wiricheya. Icho chakareruka uremu, zviri nyore kupeta uye kukwana musana yeSUV yangu. … Zvimwe Murume wangu anoti zvakanyatsogadzikana kwenguva pfupi yekugara, akajaira kuve "akachengetedzeka kwazvo" muchigaro chake chemagetsi saka achiri kugadzirisa asi achifunga kuti chichava chigaro chakakura mukufamba kwenguva! Kutumira nekukurumidza kwazvo, zvese zvakafamba zvakanyatsonaka kana uchiraira futi!
Kufadzwa kwazvo neizvi wiricheya Ndiri kukwanisa kutenderera zvirinani. Ivai nematambudziko mashoma nekusunungura makumbo mamwe ipapo iro rakakura chigaro!
Ingo gamuchira iyo aluminium 24 lbs wiricheya yangu mudiki, amai vakura vane maparkinons ekushandisa. Inoita kunge inoshambadzirwa, iri kutarisira kuiendesa kwaari munzvimbo yake yaanogara yekugara mangwana. Yakarairwa kuburikidza neAmazon, yakagamuchirwa … Zvimwe iyo chaiyo modhi, kwete iyo chaiyo kara. Ndakaodzwa mwoyo kuti burgundy cheya cheya yakanga isiri iyo yakasvika, asi isu takawedzera mamwe maribhoni kuti iye azive kuti chigaro ndechake. Kutarisira kuti achazowana mashandisiro mazhinji mairi.
Varombo kushandira vatengi. Sachigaro haachinjiki, asingakwanise kuwana runhare kubva kukambani kuti abatsirwe pasingasviki gore rapfuura, apo murwere wangu paakatenga (ndiri murapi mumusha unochengeterwa vakwegura.) Akabhadhara anopfuura $ 1,000.00 muhomwe yechigaro ichi. Zvino, … Zvimwe neavhareji kushandiswa uye isingasviki gore gare gare, mavhiri epamberi ari kubvarura uye kudonha. Haishandisike, uye Karma yakanakisa inogona kupa murwere wangu "heino nhamba yechinhu, varaire pa $ 100.00 yevaviri." Zvinonzwisa tsitsi. Rudzii rwe wiricheya kambani inobata vanhu seizvi. Chigaro chakavakwa chisina kusimba, uye kana vangova nemari yako, vapedza newe. Chenjera!
Yakarairwa yakasarudzika isingaremi Kerman wiricheya kuburikidza neWalgreens.com. Kutumirwa kubva kuCalifornia nekukasira uye ndizvo zvandakaraira.
Ndakatenga Karman S-ERGO 305 Lightweight Ergonomic wiricheya S-Ergo305Q16SS, 29 lbs., Kurumidza Kuburitsa Mavhiri, Sisitimu Rose Tsvuku, Chigaro Saizi 16 "WX 17" D, Fekitori Inogadziriswa Chigaro Kureba (Default 19 "Floor Kuti Ugare) uye zvinonakidza. … Zvimwe Ndiri munhu mudiki uye ndinonyatsoda hupamhi hwechigaro. Zviri nyore kushandisa zvakare.
Ndakagamuchira yangu wiricheya nekukurumidza uye zvinoshamisa. Icho chakareruka chaizvo zvigaro zvepachigaro zvakapfava uye zvakasununguka. Ndinonyatsochida. Uye imwe yekutenda yekutenda nekushanda ne ms nzanga.
The wiricheya yaive yakakwana kuna amai vangu vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe naBaba vangu vanozoda kuitakura nekuiturunura. Kutumira kwakatora chinguva sezvo ruvara rwacho rwakanga rusipo muzvitoro, mwaka wezororo uye chiitiko chemamiriro ekunze! Asi, yakasvika mune yakanaka mamiriro uye Amai vangu vanoda … Zvimwe it!
Anofara kwazvo nechigadzirwa chakavakirwa nhengo yemhuri zvakare zvakareruka kuisa mumotokari kushanya kwachiremba.wiricheya inofamba zvakasununguka pakapeti uye nepamusuwo edzimba.
Ichi chikuru wiricheya. Inotaridzika kunge yakanaka. Iyo yakareruka, asi yakasimba. Inopeta nyore nyore kuchengeta. Chikurukuru, yakagadzikana maererano nababa vangu vachembera. Kukosha kukuru kwemari.
Isu tangogamuchira yedu S Ergo 115 wiricheya uye zvakanaka. Saizi 16 "inokwana zvakakwana uye yakasununguka uye haina kureruka. Makushoni echigaro anobviswa uye chigaro chakakomberedzwa zvinhu zvakanaka kwazvo. … Zvimwe mavhiri ekukurumidza-kuburitsa anokwana zvakakwana mumashure memota yedu diki.
Wona Google Ongororo Siya Ongororo
pamusoro wiricheya Ongororo newe!
PaGoogle uye Yelp
Pazasi pane runyorwa rwevashandisi chaivo wongororo yakasvinwa negoogle. Vatengi chaivo uye nezvavanofanira kutaura. Isu tinovimba wongororo dzese nevakabatana senge GOOGLE, YELP, uye Amazon. Vatengi chaivo vane mukurumbira vanovimbiswa kuburikidza nezvivimbo zvekuvimba vanofanirwa kutariswa. Yup, zvese zvakanaka nezvakaipa zvinomiririrwa newe nharaunda nevatengi nevashandisi vezvigadzirwa nemasevhisi. Tinokutendai pamberi pemifungo yenyu. We kupa mazana emhando dzakasiyana dzesimba uye Chichemo chemaoko iyo inobata kumamiriro mazhinji akasiyana ayo mushandisi angave nawo. Pamusoro pe, Chichemo chemaoko inosanganisira sarudzo hombe yepamusoro unhu macheya anokwikwidza zvakanyanya mumutengo. Semagumo, we kutakura akawanda akasiyana zvikamu zve mavhiripu, zvinoenderana nemamiriro ako ezvinhu iwe unogona kuwana imwe inonyatsoenderana nemararamiro ako. Uye zvakare, isu tinopa kutakura mawiricheya, mawiricheya akajairwa, asingaremi mawiricheya, ultra lightweight mawiricheya, ergonomic mawiricheya uye vamwe vazhinji. manyuwari Mawiricheya ndirwo rudzi rwechigadzirwa icho munhu anofanirwa kuzvifambisa pasina rubatsiro rwebhatiri. Unogona kusarudza kubva pachako-propel, iyo inoda kuti mushandisi afambise nekushandisa kwemaoko avo, uye shamwari inofambiswa, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve nemunhu wekukusunda. We tenda kuti vashandisi vachakwanisa kuwana zvakanakisa wiricheya yemawoko inowanikwa pane zvavanoda chaizvo. Kusarudza kurudyi wiricheya semuenzaniso, iwe unofanirwa kutsvagiridza uye kusarudza chikamu, modhi, uye poindi yemutengo inokodzera mararamiro ako uye mamiriro. Zvichienderana nemamiriro ako ezvinhu unogona kusarudza chigaro chine mavhiri mahombe ekumashure, ayo anowanzozvifambisa. Kana iwe uine muchengeti kana iwe parizvino uri muchengeti, unogona kusarudza iyo diki kumashure vhiri vhezheni yeiyo wiricheya, iyo inosanganisirawo shamwari dzinobata. Tinoda kukubatsira iwe kuti uwane yakanakisa wiricheya. Ndiko kuzvipira kwedu kwauri. Tsvaga zvatinogona kukuitira. Taura nesu nhasi!
Manual mawiricheya vane akasiyana maficha anotendera iyo michina kuti ive yakakodzera kune wekupedzisira mushandisi. Pane misiyano pazvinhu izvi uye zvikonzero nei musiyano wega wega wakakosha kune wega mushandisi. Kana uchinyora a kufamba chigadzirwa, pane sarudzo dzakawanda dzinofanirwa kuitwa kuitira kuti usarudze chigaro chakakodzera. kufamba vashandisi vanofanirwa kunzwisisa kuti sarudzo yega yega inokanganisa sei zvimwe zvinhu. Kuva neruzivo rwechigadzirwa chakakosha. Ndeipi chakanakisa chimiro kwandiri? At Karman tinotenda kuti kunyaradzwa kwakakosha. Zvigaro zvakasununguka kwazvo zvatinopa ndezvedu Ergonomic mavhiripu. Iine ergonomics yakakodzera uye yakanaka chigaro pamutsago, uchafarira wiricheya zvachose. Kune zvimwe zvinhu zvakakosha kuti uchengete mupfungwa kana iwe uri kutenga a wiricheya. Ndokumbira kuti ubate a Dealer kana kuverenga zvimwe maererano nezve zvigadzirwa zvedu. Isu takaratidzwawo pane iyo Dr. Phil ratidza. Kuedza kwedu kushandira iyo kuremara nharaunda inotanga nekugadzira chigadzirwa chakanakisa. Izvo zvakakosha kuti ubvunze mutengesi kana DME nyanzvi kana iwe uri kuita sarudzo kwayo. Paunenge uchibvunza mibvunzo, ndapota ita shuwa kuti unotaura izvo zvinonyanya kukosha kwauri. Iko kudyara kwaunoita nhasi kuchakugara iwe kwehupenyu hwese. Semuenzaniso, kana iwe ukasarudza yakadzika chigaro kukwirira, haugone kusarudza makuru mavhiri sezvo mavhiri anozokanganisa chigaro kukwirira. Mumwe muenzaniso ungangove, kana ukasarudza makumi manomwe madhigirii etsoka iwe ungatadza kusarudza masere - masere. Kazhinji kusarudza kurongeka kwakakodzera kwe wiricheya maitiro anoita kunge akareba. Tinoziva kufamba zvishandiso zvirinani kupfuura chero ani zvake. Tinogona kukubatsira iwe kuburikidza neese maitiro. Kubva pakusarudza yakakosha set-up, kuva neyako nezvose zvawakasarudza. Taura nesu nhasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu. Tichaita zvese zvatinogona kuti tikubatsire iwe kuwana chaicho chigadzirwa. Kana paine vatengesi vedu vasingakwanise kukubatsira, ndapota email uye tichava nekuonana newe munguva pfupi. Karman ane hanya nevatengi vese pasirese. Kugutsikana kwako kwakakosha kwatiri. Mibvunzo yakawanda kwazvo nezve zvigadzirwa zvedu inogona kupindurwa kuburikidza neyedu Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo peji. Yedu emacheya emawoko zvakavakwa ne unhu mupfungwa. Isu tinoziva kuti iwe uchave uine ichi chigadzirwa newe kune izvo zvasara zve upenyu hwako uye uverenge iyo unhu inogara kwemakore mazhinji. Tarisa uone yedu garandi peji uye uone wega zviri kutaurwa nevamwe. Pane mamwe mapeji echigadzirwa isu zvakare tine wongororo dzinopa mhinduro. Tave nemakore anopfuura makumi maviri. Tine huwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda.
Zvinangwa zveVhiri kufamba
• Ipai nzira yekuzvimiririra kufamba • Wedzera mashandiro ezviitwa zvezuva nezuva nzira dzekumanikidzwa kumanikidzwa • Gara shanduko muhukuru uye huremu
Kune vanhu vane mashoma kufamba, chigaro chemanyorerwo chidimbu chakakosha chemidziyo yekuvandudza yavo unhu yehupenyu uye inopa rusununguko rwekufamba. Kare, mavhiripu zvairema uye zvinoremedza vashandisi pamwe nevachengeti uye kazhinji zvaishomeka maneuverability. Nhasi, nekuda kwekufambira mberi mukugadzira uye dhizaini, vashandisi havachafanirwe kukwikwidza vavaki vemuviri kusimudza a wiricheya kukwira masitepisi ekumhanya kana kupinda mudhiramu remota. Tine akawanda akangwara akagadzirwa mavhiripu pamusika wakakodzera wiricheya-vakawanda vanhu. Isu tinoedza kushandisa ndege yegiredhi aluminium pane zvese zvigadzirwa zvedu. kushandisa chinhu chakareruka chinobatsira kurerutsa huremu hwepuremu. Yedu yakaderera mitengo yemhando inogona kunge iine musanganiswa wesimbi nealuminium. Asi zvatinokwanisa mavhiripu zvakagadzirwa kubva kualuminium. Pasinei nezvatinoshandisa, tinoedza kupa unhu zvigadzirwa. Tinonzwisisa yako kufamba zvinodiwa. Iyo isiri yemagetsi wiricheya inofanirwa kuve yakashongedzwa asiwo inodhura-inoshanda. Isu tinoita zvese zvatinogona kuti tiwane mwero wekusimba uye mutengo wezvigadzirwa zvedu. Tarisa uone edu anozivikanwa zvigadzirwa nehuremu kuruboshwe kuruboshwe rwe peji rino.
Tipei runhare kana iwe usingakwanise kuwana wiricheya iyo ine maficha auri kutsvaga. Isu tinopa zvakawanda zvingasarudzwa uye zvishandiso zvinowanika sezvisarudzo zvezvinhu zvako wiricheya. KuKarman, isu tinoedza "bundle" uye tinosanganisira akawanda anobatsira maficha kumagaro edu kuitira kuti ako kufamba ruzivo runogona kukwidziridzwa kuzere. Isu tinovimba iwe unowana chaicho chigadzirwa kuburikidza nesarudzo yedu hombe ye kufamba midziyo. Kuzvipira kwedu ku wiricheya kugona kwakakosha kune kwedu kambani. Kuti tiite izvi, isu tinogara tichiedza kuisa rutsoka rwedu kumberi. Tinokurudzira kuverenga wongororo yechigadzirwa kuti uwane chigadzirwa chakanakisa. Izvi zvinogona kunge zviri zvekupedzisira wiricheya, kana ergonomic wiricheya. Iwe unowana zvigadzirwa zvine tekinoroji yekupedzisira senge kumira mavhiripu. Kana iwe ungangoda nyore Walker kukubatsira nehupenyu hwako hwezuva nezuva. Chero zvazviri, Karman ari pano kwauri. Ndokumbira utarise ese edu eboka zvigadzirwa. Bvunza kune mutengesi kana kungoti fonera isu. Chinyorwa mavhiripu ndiwo unyanzvi hwedu. Mawiricheya ipa vashandisi ne kufamba kuti vazvifambise pachavo. Ivo zvakare vanotendera muchengeti kubatsira nemushandisi kufamba. Isu tapedza anopfuura makumi maviri emakore tichigadzira mavhiripu uye kuzvigadzira munzvimbo yedu yehunyanzvi nzvimbo. Unyanzvi hwedu ndewe lightweight echinyorwa macheya. Ivo kazhinji vari pasi pemakumi matatu emapaunzi. Asi isu zvakare tine mamwe ari pasi pemakumi maviri nemapondo. Chiedza chakareruka chinogona kubatsira vese vanochengeta uye vashandisi. Iyo zvinobatsira zvikuru. Kubva pane nyore kutakura, kuve nyore kufambisa. Dzidza Zvakawanda Nezve Zvigadzirwa
Kuwana Zvakakwana hwiricheya kuFIT YAKO kwakakosha kwazvo. Ndokusaka isu takaparura nyowani ERGO FIT ™ Campaign yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics, uchienzanisa uye uchienzanisa zvinodiwa nemuviri wako, yako Mawiricheya Zviyero, uye zvakare kuenzanisa nharaunda kwaunenge uchinakidzwa neyako wiricheya. Kunyangwe iri yekunze rwendo, kana kuona kuti kukwira a ramp iine kushomeka kushoma, kana kuve wakasununguka sezvinobvira nekuda kwekushandisa kwenguva refu, yedu ERGO FIT ™ inopa huwandu hwakawanda hwe sarudzo uye zvishongedzo, kana mamodheru ane akasiyana misiyano yakagadzirirwa kuwedzera yako kufamba uye nyaradzo.
MACHITO - Chigadzirwa chega chega Chekumisikidza Peji chine ruzivo rwese rwakanangana nechigadzirwa (semuenzaniso HCPCS Makodhi, Zvidimbu, Zvinyorwa, UPC, nezvimwewo). Kana iwe uchida kuona chese chigadzirwa chakanyorwa nema specs uye ruzivo, ndapota shanyira yedu Zviwanikwa Landing peji nekudzvanya HERE. World Health Organisation - Mawiricheya Wiricheya Mawiricheya - Ndeipi yakanakisa zvinhu? Akaremara - Maitiro Ekusarudza iyo Chairo Wiricheya Nderupi Rudzi rweWiricheya Mota Rakandinakira? Kumhara Peji Dhairekitori
Kana ino inguva yako yekutanga kutsvaga a wiricheya yemawoko, iwe uri munzvimbo chaiyo. Iko zvakare kune mamwe mawebhusaiti iwe aunogona kunongedzera neruzivo rwakanaka senge Wikipedia. Tiri pano kuzokupa iwe neruzivo rwakanakisa pane zvigadzirwa zvedu. Kutsvaga wiricheya yemawoko ndeimwe yemari inonyanya kukosha. Unogona kutsvaga nezvinhu zvakawanda. Vamwe vanotarisa pamutengo. Ipo vamwe vachitsvaga huremu. Wese munhu ane zvakasarudzika. Zvigaro zvemanyorero zvinouya mumhando dzese dzemhando uye saizi. Zvimwe zvigaro zvemaoko zvinogona kukwira kusvika pamasendimita makumi matatu paupamhi. Zvimwe zvigaro zvemaoko zvinongova mapaundi gumi nemashanu muhuremu hwehuremu. Haasi ese marangi ane yakasarudzika sarudzo ye mavhiripu, asi Tine mhando dzese dze mavhiripu. Tarisa mavhidhiyo edu echigadzirwa usati watenga. Mavhidhiyo edu anokupa iwe rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu. Izvi zvinosanganisira kuratidza kuti chigadzirwa chinopetwa sei, kana maitiro ekuita tilt a wiricheya. Tarisa uone youtube.com/karmanhealthcare. Nyorera kune yedu Youtube chiteshi uko Tichakuzivisa iwe kana paine vhidhiyo nyowani yakatumirwa pane yedu chiteshi. Izvo zvakare zvakakosha kuti udzidze nezve ndiani achashandira chigaro chako. Kutenga kufamba zvigadzirwa zviri nyore mazuva ano. Unogona kutenga chigaro pamhepo zviri nyore. Vatengesi vedu vepamutemo vanowanzo kupa pachena kutumira. Kutenga online zvinoreva kuti haufanire kusiya nyaradzo yeimba yako kuti utenge zvigadzirwa zvedu. Iwe unofanirwa kutipa kufona kana iwe uine chero mibvunzo. Iwe unogona zvakare kuwana yemunharaunda mutengesi kuburikidza neyedu mutengesi locator. Isu tinogara tichiita kurudziro kune vatengi vedu. Zvinhu zvakakosha pakusarudza kutenga iyi mhando yechigadzirwa inosanganisira: kurema kirasi uye chigadzirwa mhando. Chinyorwa mavhiripu kazhinji iine matatu akasiyana makirasi ehuremu. Kurema kwakadzika, kureruka, uye kuyera kwekusimudzira. Zvigaro zvekuzvigadzirira zvinewo zvikamu. Izvi zvinosanganisira bariatric, kutsenhama kana kukwirira kumashure. Pane chirwere here? Mushandisi anoita sei zviitiko zvezuva nezuva? Mushandisi akazvimiririra here? Tine mavhiripu yakagadzirirwa vashandisi vanoshanda vese vadiki nevakuru. Ese mazera mapoka anogona kushandisa cheya chemaoko. Izvo zvakakosha kuti utange kushandisa gwaro rekuyera. Kukodzera kwakakodzera ndicho chinhu chakakosha kwazvo pakutenga wiricheya. A kufamba chigaro chinofanirwa kunge chiri chiwedzero chemuviri wemunhu. Ipapo tinotarisa kunyaradzo. Iye zvino munhu agadzikana here? Iko kune yakakodzera ergonomics? Munhu wacho anowanzo tsvedza here? Kunge munhuwo zvake akagara padhesiki pahofisi. Ergonomics yakakodzera yakakosha. Mushure mekunge tadzikisa zvinhu izvozvo, zviri nyore. Isu tinogona ipapo kubvunza izvo zvigadzirwa zvinopa zvimwe zvinobatsira? Iko kune akareruka modhi? Kana mutengi anoshuvira kuchengetedza imwe mari? Mimwe macheya emawoko anongoshandiswa kwechinguva. Mune ino kesi, nyanzvi dzedu dzinogona kukurudzira kugara mukati mebhajeti. Zvimwe zvisingaite wiricheya vashandisi vanoda zvakanakisa. Kuva nedenga kana musoro wepamusoro kunowedzera mutengo. Asi panguva imwe chete, zvinoita kuti kufamba kwako kuve nyore. Izvo zvakakosha kwatiri. Kuti uwane kukwana kwakaringana iwe. Vamwe vashandisi vanoda kukwira zvishoma. Vamwe vanoziva kuti bhandi repachigaro rakanaka rinokosha. Isu dzimwe nguva tinogamuchira tsika mirairo. Zvikuru izvo! Tinoda kubatsira. Zvinongoda kutaurirana kwakanaka. Ita shuwa yekuudza mutengesi wako zvauri kutsvaga. Tine vatengi veese mazera. Kwete izvozvo chete, isu tine vatengi vane akasiyana mamiriro. Ndokusaka tine anopfuura zana emamodeli. Unogona kuve neyakaunzwa pasuo rako zuva rinotevera. Vazhinji vevatengesi vedu vanopa mahara kutumira. Vamwe vatengesi vanotopa 100 mazuva emahara kutumira. Mutengesi wega wega ane chipo chakakosha kumushandisi wekupedzisira pane chigadzirwa cheKarman.
isina kurema wheelchair
[yrw business_id = "soFg6MiHeYaPSwbgWAC8ig" refresh_reviews = ichokwadi kuvhura_link = ichokwadi nofollow_link = ichokwadi]